Facebook ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Security မြှင့်ပြီး သုံးကြမယ်။ - For her Myanmar
Facebook ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Security မြှင့်ပြီး သုံးကြမယ်။
အကောင့်ဟက်ခံရမှ ကူပါကယ်ပါအော်နေမယ့်အစား ကြိုတင်လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်
ယောင်းတို့ရေ….ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook သုံးစွဲသူလူဦးရေ ၁၀၀ မှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က လုံခြုံရေးအားနည်းလို့ အကောင့် Hack ခံရတာတွေ၊ ငွေခြိမ်းခြောက်ခံရတာတွေ စတဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုတာနဲ့ အကောင့်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ အချက်လက်တွေ မရှိရင်တောင် စိတ်အနှောင့်အယှက်တော့ ဖြစ်မိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် Facebook ပေါ်က ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေကို အခု ဖြူသန့်ပြောပြမယ့် အချက်လေးတွေအတိုင်း ကာကွယ်ပေးလိုက်ရင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လုံခြုံစေမှာပါနော်။
(၁) အားကောင်းတဲ့ Password ကိုဖန်တီးပါ။
Password ကိုမှတ်ရလွယ်တဲ့ မွေးနေ့တို့၊ ၁၂၃၄၅၆၇၈ တို့ စတဲ့လွယ်ကူတဲ့ ဂဏန်းတွေကိုမထည့်ထားသင့်ပါဘူး ယောင်းတို့ရေ။ စာလုံးအကြီးတွေ၊ စာလုံးအသေးတွေ၊ ဂဏန်းတွေ ရောထည့်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ Password ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ မေ့လွယ်တဲ့ ယောင်းလေးတို့ကတော့ ရေးမှတ်ထားဖို့လိုမယ်နော်။
(၂) Two-factor authentication
Two-factor authentication ကတော့ Facebook login ထဲဝင်ရင် အဆင့်နှစ်ဆင့်ခံပြီး ဝင်ရတာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်လေးတော့ Password ခိုးခံထိရင်တောင် Account ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ code နံပါတ်ကို ယောင်းတို့သုံးနေတဲ့ ဖုန်းလေးထဲ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Code နံပါတ်မသိရင် Account ဝင်လို့ မရနိုင်တာကြောင့် Account ပိုလုံခြုံစေမှာပါ။
For Her Myanmar နဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ Thingyan Flash Sale မှာ ၄၀% ထိ ဒစ်စ်ကောင့်တွေ ခံစားခွင့် ရရှိမှာပါ ယောင်းတို့ရေ… ဧပြီ ၉ရက်နေ့ထိပဲနော်..
Facebook Setting ထဲက Setting & Privacy >> Privacy Shortcuts >> Account Security >> Use two-Factor authentication >> Turn on ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ Add security ထဲမှာတော့ ယောင်းတို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုထည့်ပေးပါ။ Login ဝင်ရင် code no လေးကို အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထဲ ပို့ပေးတာကြောင့်ပါ။ Authentication App လေးကို download လုပ်ပြီးတော့လည်း QR code ကို Scan ဖတ်ပြီးဝင်လို့ရပါတယ်။
Related Article>>>Facebook ကြီးသာမရှိတော့ရင်….
(၃) ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရှာထားပါ။
Facebook lock ကျသွားလို့ ပြန်ရယူတဲ့အခါ code ပြန်ပို့ပေးဖို့အတွက် ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။
Setting ထဲက Security >>Security & Login>>> Recommended>>>Choose Friend to contact if you get lock out ထဲမှာ ယောင်းတို့ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်၊အမြဲ အဆက်သွယ်ရှိတဲ့သူတွေကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
(၄) Login ကိုစစ်ဆေးပါ။
Facebook ကိုဘယ်ဖုန်း၊ Laptop တွေနဲ့ ဝင်ထားလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ အကောင့်ကို အကောင့်ကို တစ်ယောက်တည်း ဝင်နေတာဟုတ်ရဲ့လား၊ တစ်ခြားသူတွေရော သုံးနေလားဆိုတာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတော့-
Security & Login ထဲက Where you’re Logged in မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘယ်ဖုန်းတွေနဲ့ ဝင်ခဲ့လဲ ၊ ဘယ်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ဝင်ခဲ့လဲဆိုတာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ယောင်းတို့ သုံးနေတဲ့ ဖုန်း၊ကွန်ပျုတာမဟုတ်ရင် Not You? Log Out ဆိုပြီးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
(၅) Only Me လုပ်သင့်တာလုပ်ပါ။
Email တွေ၊ မွေးနေ့တွေ၊ အိမ်လိပ်စာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Only Me လုပ်သင့်တာလုပ်ထားပါ။ ဒီလိုလုပ်ထားခြင်းက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်လို့ရသလို ယောင်းတို့ အကောင့်လုံခြုံရေး အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ Facebook နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရလို့ only me လုပ်ရတာ အဆင်မပြေရင်လည်း Friend Only လုပ်လို့ရပါတယ်။
Related Article>>>Facebook ပေါ်က သက်တန့်ရောင် reactionလေးနဲ့ LGBTQIAတို့အကြောင်း
(၆) Login လုပ်ရင် အသိပေးတဲ့စနစ်
Account ထဲ ဝင်ရင် ယောင်းတို့ကို အသိပေးမယ့် အဆင့်လေး လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။ ဒီလို အသိပေးတော့ Account ကို တခြားသူ မခိုးခင် ပြန်ရယူလို့ရတာပေါ့နော်။
Privacy Shortcuts ထဲက Account Setting >>> Get alerts about unrecognized Login >>> Notification,Messenger,email တွေထဲက ယောင်းတို့ နှစ်သက်တာ ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့ Facebook Account လုံခြုံအောင် အဆင့်မြှင့်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို သိရှိသွားလောက်ပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Reference Links : nakedsecurity, cnet
Phyu Thant (For Her Myanmar)
အကောငျ့ဟကျခံရမှ ကူပါကယျပါအျောနမေယျ့အစား ကွိုတငျလုံခွုံအောငျ ပွုလုပျထားသငျ့ပါတယျ
ယောငျးတို့ရေ….ဆိုရှယျမီဒီယာတဈခုဖွဈတဲ့ Facebook သုံးစှဲသူလူဦးရေ ၁၀၀ မှာ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက လုံခွုံရေးအားနညျးလို့ အကောငျ့ Hack ခံရတာတှေ၊ ငှခွေိမျးခွောကျခံရတာတှေ စတဲ့ ပွဿနာတှေ ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ ဒီလိုကွုံတှရေ့ပွီဆိုတာနဲ့ အကောငျ့ထဲမှာအရေးကွီးတဲ့ အခကျြလကျတှေ မရှိရငျတောငျ စိတျအနှောငျ့အယှကျတော့ ဖွဈမိလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးတှေ မဖွဈရအောငျ Facebook ပျေါက ကိုယျပိုငျအခကျြအလကျတှေ ကို အခု ဖွူသနျ့ပွောပွမယျ့ အခကျြလေးတှအေတိုငျး ကာကှယျပေးလိုကျရငျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ လုံခွုံစမှောပါနျော။
(၁)အားကောငျးတဲ့ Password ကိုဖနျတီးပါ။
Password ကိုမှတျရလှယျတဲ့ မှေးနတေို့၊ ၁၂၃၄၅၆၇၈ တို့ စတဲ့လှယျကူတဲ့ ဂဏနျးတှကေိုမထညျ့ထားပါနဲ့နျော။ စာလုံးအကွီးတှေ၊ စာလုံးအသေးတှေ၊ ဂဏနျးတှေ ရောပွီးထညျ့ပေးပါက ခိုငျမာတဲ့ Password ကို ဖနျတီးနိုငျပါတယျ။ မလှေ့ယျတဲ့ ယောငျးလေးတို့ကတော့ ရေးမှတျထားဖို့လိုမယျနျော။
Two-factor authentication ကတော့ Facebook login ထဲဝငျရငျ အဆငျ့နှဈဆငျ့ခံပွီး ဝငျရတာကို ပွောတာဖွဈပါတယျ။ ဒီအဆငျ့လေးတော့ Password ခိုးခံထိရငျတောငျ Account ထဲဝငျလိုကျတာနဲ့ code နံပါတျကို ယောငျးတို့သုံးနတေဲ့ ဖုနျးလေးထဲပို့ပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ Code နံပါတျမသိရငျ Account ဝငျလို့ မရနိုငျတာကွောငျ့ Account ပိုလုံခွုံစမှောပါ။
For Her Myanmar နဲ့ Shop.com.mm ရဲ့ Thingyan Flash Sale မှာ ၄၀% ထိ ဒဈဈကောငျ့တှေ ခံစားခှငျ့ ရရှိမှာပါ ယောငျးတို့ရေ… ဧပွီ ၉ရကျနထေိ့ပဲနျော..
Facebook Setting ထဲက Setting & Privacy >> Privacy Shortcuts >> Account Security >> Use two-Factor authentication >> Turn on ကိုရှေးပေးလိုကျရငျရပါပွီ။ Add security ထဲမှာတော့ ယောငျးတို့ လကျရှိသုံးနတေဲ့ ဖုနျးနံပါတျလေးကိုထညျ့ပေးပါ။ Login ဝငျရငျ code no လေးကို အဲ့ဒီဖုနျးနံပါတျထဲ ပို့ပေးတာကွောငျ့ပါ။ Authentication App လေးကို download လုပျပွီးတော့လညျး QR code ကို Scan ဖတျပွီးဝငျလို့ရပါတယျ။
Related Article>>>Facebook ကွီးသာမရှိတော့ရငျ….
Facebook lock ကသြှားလို့ ပွနျရယူတဲ့အခါ code ပွနျပို့ပေးဖို့အတှကျ ယုံကွညျရတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ထညျ့ထားလို့ရပါတယျ။
Setting ထဲက Security >>Security & Login>>> Recommended>>>Choose Friend to contact if you get lock out ထဲမှာ ယောငျးတို့ ယုံကွညျရတဲ့ သူငယျခငျြး၊ မိသားစုဝငျ၊အမွဲ အဆကျသှယျရှိတဲ့သူတှကေို ထညျ့ပေးလိုကျရငျ ရပါပွီ။
(၄) Login ကိုစဈဆေးပါ။
Facebook ကိုဘယျဖုနျး၊ Laptop တှနေဲ့ ဝငျထားလဲဆိုတာကိုစဈဆေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ ဒီနညျးလမျးလေးကတော့ အကောငျ့ကို အကောငျ့ကို တဈယောကျထဲဝငျနတောဟုတျရဲ့လား၊ တဈခွားသူတှရေော သုံးနလေားဆိုတာ ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုစဈရမလဲဆိုတော့-
Security & Login ထဲက Where you’re Logged in မှာ ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ ဘယျဖုနျးတှနေဲ့ ဝငျခဲ့လဲ ၊ ဘယျကှနျပြူတာတှနေဲ့ ဝငျခဲ့လဲဆိုတာ ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲမှာ ယောငျးတို့ သုံးနတေဲ့ ဖုနျး၊ကှနျပြုတာမဟုတျရငျ Not You? Log Out ဆိုပွီးရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
(၅) Only Me လုပျသငျ့တာလုပျပါ။
Email တှေ၊ မှေးနတှေ့ေ၊ အိမျလိပျစာတှေ၊ ဖုနျးနံပါတျတှကေို only လုပျသငျ့တာလုပျထားပါ။ ဒီလိုလုပျထားခွငျးက ကိုယျရေးကိုယျတာအခကျြအလကျတှကေို ကာကှယျလို့ရသလို ယောငျးတို့ အကောငျ့လုံခွုံရေး အတှကျလညျး အထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။ Facebook နဲ့ အလုပျလုပျနရေလို့ only me လုပျရတာ အဆငျမပွရေငျလညျး Friend Only လုပျလို့ရပါတယျ။
Related Article>>>Facebook ပျေါက သကျတနျ့ရောငျ reactionလေးနဲ့ LGBTQIAတို့အကွောငျး
(၆) Login လုပျရငျ အသိပေးတဲ့စနဈ
Account ထဲ ဝငျရငျ ယောငျးတို့ကို အသိပေးမယျ့ အဆငျ့လေးလုပျထားလို့လညျးရပါတယျ။ ဒီလို အသိပေးတော့ Account ကို တဈခွားသူမခိုးခငျ ပွနျရယူလို့ရတာပေါ့နျော။
Privacy Shortcuts ထဲက Account Setting>>>Get alerts about unrecognized Login >>> Notification,Messenger,email တှထေဲကယောငျးတို့ နှဈသကျတာ ဖှငျ့ထားလို့ရပါတယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့ Facebook Account လုံခွုံအောငျ အဆငျ့မွှငျ့နိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို သိရှိသှားလောကျပါပွီ။ ကိုယျတိုငျပွုလုပျပွီးရငျလညျး သူငယျခငျြးတှကေို မြှဝပေေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
Tags: Facebook, friend, hacker, login, Only me, password, security, setting
Phyu Thant April 3, 2019
သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစေမယ့် အခြေအနေ(၅)ခု
Yin Sandi Ko April 18, 2019
Phyu Thant March 8, 2019